Villarreal Oo Guul Taariikhi Ah Ka Gaadhay Real Madrid, Zidane Oo Jar Ka Laallaada Iyo Los Blancos Oo Halkii Ugu Liidatay Maraysa
HomeWararka MaantaVillarreal Oo Guul Taariikhi Ah Ka Gaadhay Real Madrid, Zidane Oo Jar Ka Laallaada Iyo Los Blancos Oo Halkii Ugu Liidatay Maraysa
Gool uu wakhti dhamaadkii ciyaarta Pablo Fornals u dhaliyey Villarreal ayaa usoo hooyey guul taariikhi ah oo ay muddo dheer sugaysay, taas oo cadaadiska kusii kordhiyey tababare Zinedine Zidane oo jar ka laallaada.
Real Madrid oo la filayey inay garoonkeeda iska ridi doonto culaysyo badan oo saarnaa kaddib guul darrooyin deris la noqday oo quus ka istaajiyey horyaalka aan kala badhka gaadhin, ayaa waxay soo bandhigtay ciyaar fiican, waxaana ay dhawr jeer ku dhowaatay inay shabaqa taabato, iyadoo Cristiano Ronaldo uu birta ka jaray laag xor ah. Sidoo kale, Gareth Bale ayaa marar dhawr ah sameeyey dedaalo ku dhowaaaday shabaqa Villarreal.
Qaybta labaad ee ciyaarta ayaa waxa soo noolaaday Villarreal oo sameeyey isbeddel horumar ah, waxaana ay dhamaadkii ciyaarta lasoo baxsadeen kubbad ay Real Madrid koornu kusoo laagatay, taas oo orod iyo xarfad ay isku soo dhiidhiibeen ciyaaryahannada fardaha ee Villarreal, taas oo goolka hortiisa loo dhigay Denis Cheryshev oo ka tirsanaan jiray Real Madrid, hase yeeshee, goolhaye Navas ayaa ka badbaadiyey, waxaanay kubaddu u tagtay Fornals oo si xarrago leh ugu hubsaday shabaqa Real Madrid.
Guul darradan ayaa waxay ka dhigtay Real Madrid inay 19 dhibcood ka hoosaynayso Barcelona haddii ay badiso ciyaarta Axadda ay la yeelanayso Real Sociedad.
Ronaldo iyo xiddigaha kale ee Real Madrid ayaa garoonka ka baxay iyagoo madaxa haysta, isla markaana taageereyaashu ay ku qaylinayaan.
Guul-darradan ayaa waxay dhinaca kale soo dedejinaysaa mustaqbalka Zidane ee Bernabeu inuu si degdeg ah kusoo dhamaado, iyadoo la filayo in maalmaha soo socda uu madaxweyne Florentino Perez soo saari doono go’aan uu shaqada kaga caydhinayo.